Umahluko we-Samsung Galaxy S10 kunye neHuawei P30 ziya kuza ne-12 GB ye-RAM | Zonke iinkonzo ze-intanethi
Ukuvuza okutsha, okuvele eWeibo, kuyayityhila loo nto Iifowuni ze-Samsung Galaxy S10 kunye neHuawei P30 yokuqalisa ngoMatshi 2019. Ukuvuza kukwaveza ukuba i-Galaxy S10 X 5G kunye neHuawei P30 Pro iimodeli zinokuxhotyiswa nge-12GB ye-RAM.
Iinkampani ze-Smartphone ziqale ukukhupha iifowuni nge-10GB ye-RAM. Ifowuni yokudlala Xiaomi Black Shark Helo Yisiphelo sokuqala esixhotyiswe nge-10 GB ye-RAM, elandelwa sisazisi esandula ukubhengezwa Xiaomi Mi Mix 3.
Umfanekiso olandelayo utyhila oko I-Galaxy S10 iza kufika ngoMatshi ngeendlela ezineNjenge-Galaxy S10 ene-4GB ye-RAM, i-Galaxy S10 Plus ene-6GB ye-RAM, i-Galaxy S10 X ene-8GB ye-RAM, kunye ne-Galaxy S10 X 5G ene-12GB ye-RAM, amandla amakhulu. Into enomdla kukuba akukho 10GB ye-RAM inguqulelo yeGPS S10, kodwa le yinto ekufuneka iqinisekisiwe kamva.
Ukuvuza kuyakutyhila oko IHuawei iya kuba ngumceli mngeni kuthotho lweGPS S10 ngee-smartphones zayo ze-P30. I-Huawei P30 kulindeleke ukuba ibe ne-8GB ye-RAM, ngelixa iP30 Pro inyusa nge-12GB ye-RAM.
Njengoko igama layo libonisa, I-Samsung Galaxy S10 X 5G ene-12 GB ye-RAM iya kuthi ixhotyiswe ngenkxaso yokunxibelelana kwe-5G. Akukho nto ikhankanyiweyo ngenkxaso yenethiwekhi ye-5G kwiP30 Pro ekuvuza okungasentla. Okwangoku, iHuawei ikwajolise ekusunguleni ifowuni yayo yokuqala ye-5G ekuqaleni kuka-2019. Ke kukho ithuba lokuba iP30 Pro ibe yifowuni yokuqala yeHuawei yokuxhasa uqhagamshelo olukhawulezayo lwe5G. UXiaomi, emva kokuphehlelelwa kweMi Mix 3, uqinisekisile ukuba kuyakubakho uguqulelo lwayo lwe-5G kwikota yokuqala ye-2019, ke olu khuphiswano sele lunomdla.
Umendo opheleleyo kwinqaku: I-Androidsis » Izaziso » I-Samsung Galaxy S10 kunye neHuawei P30 ziya kuza ne-12GB RAM eyahlukileyo